Yan Aung: အတောင်ပံများနှင့် (၂)
စွန်လွှတ်တဲ့အခါမှာ အဖော်ရှိရင်တော့ အဲဒီ့တစ်ယောက်က စွန်ကို ခပ်ဝေးဝေးသယ်သွားပြီး အတည့်လေးကိုင်ထားပေးပါတယ်. အဲဒီ့မှာ ကိုယ်က ရစ်ဘီး(သို့) ရစ်လုံးကို အသင့်ပြင်ထားပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘော်ဒါကို ခေါင်းဆတ်ပြပြီး အချက်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဲဒီ့မှာ သူက စွန်ကိုတောင်ပံနှစ်ဖက်က ကိုင်ထားရာကနေ အပေါ်ကို အသာလေးထိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဲဒါကို စွန်ကော့တင်ပေးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်. အဲဒီ့အချိန်မှာ ကိုယ်က ရစ်ဘီးကို ရစ်ပြီး စွန်ကို အပေါ်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ရပါတယ်. အဆင်ပြေရင် လေကြောင်းနဲ့မိပြီး တစ်ခါတည်း အပေါ်ကို ထိုးတက်သွားပါတော့တယ်. အဆင်မပြေရင်တော့ စွန်ကြိုးက ကိုယ့်ရစ်ဘီးထဲကို ပိုပိုဝင်လာပြီး စွန်ကလည်း ကိုယ့်နားကို ပိုပိုနီးလာကာ လေကြောင်းမမိတော့ဘဲ အောက်ပြန်ကျသွားတတ်ပါတော့တယ်. ဒီနေရာမှာ စွန်လွှတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ စွန်ကော့တင်ပေးမယ့်သူ မရှိရင်တောင်မှ စွန်ကြိုးကို အသာလေးတောက်ပြီး အပေါ်ကို လွှတ်တင်သွားနိုင်ပါတယ်.
စွန်တောက်နည်းကတော့ လက်ညှိုးလေးကို ခပ်ကွေးကွေးလေးထားပြီး စွန်ကြိုးလေးကို လက်ညှိုးထိပ်ဖျားလေးမှာထားပြီးတော့ လက်မလေးနဲ့ညှပ်ခါ အသာလေးဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ အပေါ်ကိုရောက်အောင် ဆွဲတင်တဲ့နည်းပါ. အပေါ်ကို တစ်ချက်ဆွဲတင်လိုက်၊ စွန်လေးက တက်လာလိုက်၊ ပြီးတော့ အနောက်ဖက်ကို ပြန်ကော့သွားချိန်မှာ တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ရစ်ဘီးကို အသာလေးလှည့်ပြီး ကြိုးလိုက်လျှော့ပေးလိုက်၊ နောက်တစ်ချက်တောက်တင်လိုက်၊ ကြိုးထပ်လျှော့ပေးလိုက်နဲ့ လေကြောင်းမိတဲ့အချိန်ထိ တောက်တင်သွားရတာပါ. အဆင်မပြေရင် စွန်ကြိုးရှတတ်ပါသေးတယ်. ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဖြစ်တတ်လဲဆိုရင် စွန်ကြိုးက ကိုယ့်လက်ညှိုးအရစ်လေးပေါ်ကို ကွက်တိကျသွားတဲ့အချိန်မျိုးလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ စွန်လွှတ်တဲ့အရွယ်တုန်းက စွန်ကြိုးခဏခဏရှတတ်ပါတယ်. လူကြီးတွေကတော့ ဟန်းဒီးပလပ်စ်လို ပလာစတာလေးတွေနဲ့ ကပ်ပြီး သူတို့လက်ညှိုးလေးတွေကို ကာကွယ်တတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို ကလေးတွေကတော့ ကလေးနည်းနဲ့ပဲ သွေးတိတ်အောင်လုပ်ပါတယ်. ဘာလုပ်လဲဟုတ်လား...
သွေးတွေကို အရင်ဆုံးအကျီင်္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သတင်းစာစက္ကူအပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုတ်လိုက်ပါတယ်. ရေဘုံဘိုင်နဲ့နီးရင်တော့ရေသွားဆေးချလိုက်ပါတယ်. ပြီးလည်းပြီးရော ဖတ်ခနဲ ကိုယ့်ဒဏ်ရာပေါ် တံတွေးထွေးချလိုက်ပါတယ်. ပြီးတော့ တံတွေးလေးကို ညီသွားအောင်တောင် ဟိုဖက်ဒီဖက်လှည့်သုတ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်. ပြီးလည်းပြီးရော ပေသွားတဲ့လက်ကို ဘောင်းဘီနဲ့သုတ်လိုက်ပါတယ်. ကမ္ဘာကျော်ဆေးနည်းလမ်းကြီးပါပဲ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
အဲဒါက လေငြိမ်နေတဲ့အချိ်န်မှာ ကိုယ့်စွန်အပေါ်ရောက်အောင် တောက်တင်ရတဲ့ စွန်တောက်နည်းပါ. စွန်ငြိလို့ တောက်တဲ့ စွန်တောက်နည်းကိုတော့ နောက်ပိုင်း ရေးရင်းနဲ့ ဆက်ပြောပြသွားပါမယ်.
ကဲ. ပရိသတ်လည်း အခုဆို စွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ရင်းနှီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်. ရှေ့လျှောက် ကျွန်တော်တို့ စွန်လောကသားအချင်းချင်း သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ၊ စကားဝှက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို မိတ်ဆက်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ. ဟတ်ဟတ်
ကိုယ့်စွန်လေး လေထဲရောက်သွားတာနဲ့ ပထမဦးဆုံး လုပ်ရတာကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရတာပါပဲ. ဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်စွန်ကို ဘယ်လောက်အမြင့်ထိ လွှတ်တင်မလဲပေါ့. အဲဒါကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငဲ့ကြည့်ရပါသေးတယ်.
ဘေးနားမှာ ဘယ်သူ လာလွှတ်လဲ. သူက ကိုယ့်မိတ်ဆွေလား၊ ရန်သူလား၊ လေထဲမှာရော ကိုယ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ ကိုယ့်စွန်ကို လာပြီး ရန်မူနိုင်တဲ့ ပြိုင်ဖက်ရှိလား၊ အဲဒါတွေကို တွက်ဆပြီး အမြင့်ဘယ်လောက်ထိတက်မယ်ဆိုတာ တွက်ရပါတယ်.
အဲဒါတွေကို မတွက်ဘဲ လွှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြိုးကိုလျှော့လျှော့ပြီး အမြင့်ကိုတင်သွားလိုက်ရင် ဘေးနားက တစ်ယောက်က ဟောဆို သူ့စွန်ကိုလွှတ်တင်၊ ဟောဆို ကိုယ့်ကို လာဖြတ်ချ၊ ကိုယ်က နိုင်သွားရင် အကြောင်းမဟုတ်၊ ရှုံးသွားရင်တော့ ကိုယ့်စွန်က ပြတ်ရုံတင်မကဘူး၊ ကြိုးပါ အရှည်ကြီး ပါချသွားရော၊ ဟိုကောင်က သူ့ကြိုးခပ်တိုတိုလေးနဲ့ လာဖြတ်တာလေ. အဲဒီ့အခါမျိုးကျတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် နှစ်ခါနာမိအေးဖြစ်ရပါတယ်. စွန်လည်းပြတ်၊ ကြိုးလည်း အရှည်ကြီး ပါတာကိုး...
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စွန်လွှတ်တဲ့အခါမှာ အနားမှာ လွှတ်သူအချင်းချင်း ဖြတ်လေ့မရှိပါဘူး. Unwritten Law ပေါ့ဗျာ. ပြီးတော့ ကိုယ့်ပြိုင်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်နားလာလွှတ်လေ့မရှိပါဘူး. ဒါတွေက ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲမှာမို့လည်း သဘောတူထားလို့ရတာပေါ့ဗျာ. ဟိုး ပန်းခြံထဲ၊ ကွင်းပြင်ထဲ လွှတ်ရင်တော့ လာထားဆိုတာချည်းပဲ. လေထဲမရောက်လိုက်နဲ့. ရောက်တာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး ဖြတ်ကြတော့တာပဲ. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်စွန်လေးကို လေထဲရောက်အောင် တောက်တင်နေတုန်းရှိသေးတယ်. လေကြောင်းမိနေတဲ့ အကောင်က အောက်ထိနှိမ့်ချလာပြီး လာဖြတ်တယ်. အဲ. ရန်ကုန်လေသံနဲ့ပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လေထဲရောက်တာနဲ့ မျှားတော့တာပဲ. နယ်ဖက်တွေမှာတော့ စွန်ဖြတ်တယ်. စွန်တိုက်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်.
ဩော်. စကားချပ်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ လေကြောင်းမိနေတဲ့ စွန်က လေကြောင်းမမိသေးတဲ့ စွန်ကို ဖြတ်ရင် သူ့အတွက် နိုင်ခြေပိုများပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ လေကြောင်းမိနေတဲ့အတွက် သူ့ကြိုးအသွင်းအထုတ်က ပိုမြန်ပါတယ်. ကြိုးချင်း မှန်စာအရည်အသွေးတူနေရင်တောင် လေကြောင်းမိနေတဲ့စွန်က ပွတ်တိုက်အားပိုမြန်တဲ့အတွက် နိုင်ခြေများပါတယ်. ဒါကြောင့် ကွင်းပြင်ထဲမှာ လွှတ်တာ လေထဲရောက်ဖို့ ပိုလွယ်သလို Risk လည်း များပါတယ်. တကယ့် လူ့ဘ၀ကြီးကျနေတာပဲနော်. ဟတ်ဟတ်.
ခုနက စွန်ကြိုးလျှော့တာကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ လျှော့ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်. အခုအဲဒါကိုပဲ ဆက်ပြောပါမယ်. စွန်ကြိုးကို ခပ်နိမ့်နိမ့်လည်း မထားသင့်ပါဘူး. လေကြောင်းအမြဲမိနေအောင် အတိုးအလျှော့ လုပ်ပေးနေရပါတယ်. မဟုတ်ရင် ခုနက ပြောသလို တကယ်တမ်း စွန်ချင်းမျှားခါမှ ကိုယ့်စွန်က လေကြောင်းမမိတော့ရင် သွားရောပဲဗျ. ပုံမှန် မြင်သာအောင် ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော် စွန်လွှတ်ရင် ကိုက် ၁၀၀ အကွာအဝေးလောက်ထိပဲ ထားလေ့ရှိပါတယ်. ကိုက် ၁၀၀ ဆိုတော့ ပေ ၃၀၀ နီးပါးပေါ့. အဲဒီ့ထက်တော့ မကျော်တတ်ပါဘူး. ဆရာကြီးတွေကတော့ ဟိုးအမြင့်ကြီးထိလွှတ်တင်ပြီး အမြင့်ကြီးမှာပဲ မျှားကြပါတယ်. သူတို့ကြိုးတွေကလည်း ကောင်းမှကောင်း၊ ရစ်ဘီးထဲမှာဆိုရင်လည်း ကြိုးတွေအထပ်လိုက်၊ ကိုက်ပေါင်းများစွာလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်. ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဖေမုန့်ဖိုးပေးမှ ပြေးဝယ်ရတာဆိုတော့ ကိုက် သုံးလေးရာ အလွန်ဆုံးပဲ. ဒါတောင် စွန်လိုက်လို့ရလာတဲ့ကြိုးလေးတွေ ရစ်ထည့်ထားတတ်သေးလို့ ကိုယ့်ရစ်လုံးထဲမှာ ကြိုးတွေက ရောင်စုံရှိနေတတ်သေးတယ်. မှန်စာ ကွာလတီကလည်း မျိုးစုံပဲပေါ့. ဟတ်ဟတ်.
လာနေပြီ. ဟိုဖက်က ပြိုင်ဖက်စွန်တစ်ကောင် ကျွန်တော့်စွန်ကို မြင်သွားပြီ... သူ အနားကို ချဉ်းကပ်လာပြီ.
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေထဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက အားတွေ ထည့်ထားလိုက်တယ်. နောက်ဖက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်နောက်မှာ လူတွေ၊ ကားတွေ ရှိနေလား၊ အုတ်ခဲတွေ၊ အုတ်ခုံတွေခံနေလား ကြိုကြည့်ထားလိုက်တယ်.
ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုအတွက် လှုပ်ရှားရတယ်.
အဲဒါကတော့ အပေါ်က ၀င်မလား. အောက်က ၀င်မလားဆိုတာပါပဲ.
ကျွန်တော်တို့ စွန်တွေကိုလေထဲမလွှတ်တင်ခင် ကိုယ့်မှန်စာကြိုးရဲ့ သဘာဝကို အရင်စူးစမ်းလေ့လာရပါတယ်. ကိုယ့်စွန်ကြိုးကို ခြောက်လက်မလောက် ဖြတ်ချလိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကိုင်ထားခိုင်းပါတယ်. ပြီးတော့ ကိုယ့်ရစ်လုံးက ကြိုးကို နည်းနည်းဆွဲထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းကိုင်ထားတဲ့ ကြိုးစလေးအပေါ်က ပတ်လိုက်ပါတယ်. သူကလည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သူ့ကြိုးစကို ကိုင်ထားတယ်. ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ကြိုးစကိုကိုင်ထားတယ်. ပြီးတော့ သတိလည်းပေးလိုက်ပါသေးတယ်.
မင်းက အောက်၊ ငါက အပေါ်နော်. ရယ်ဒီ?
အိုကေ ဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကြိုးအချင်းချင်းပွတ်ပြီး ဖြတ်ကြပါတော့တယ်. အဲဒီ့မှာ ဘယ်သူစပြတ်သွားလဲ ကြည့်တယ်.
သူက ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က အပေါ်က ၀င်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်စွန်ကြိုးကို အပေါ်ကြိုးလို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းက အောက်ကနေ၀င်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်စွန်ကြိုးဟာ အောက်ကြိုးပါ.
အဲဒီ့ မဟာတွေ့ရှိချက်ကြီးကို တကယ်စွန်ချင်း လေထဲမှာ ဖြတ်ကြရင် အသုံးချရပါတယ်. ကိုယ့်ကြိုးက အောက်ကြိုးဆိုရင် ပြိုင်ဖက်စွန်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါ သူ့ကြိုးအောက်ကနေ ၀င်နိုင်အောင် ပညာသားပါပါနဲ့ လုပ်ရပါတယ်. အပေါ်ကြိုးဆိုရင်တော့ အပေါ်က အုပ်စီးနိုင်အောင် လုပ်ရတာပေါ့.
ကဲ. ဆိုပါတော့ ကျွန်တော့်ကြိုးက အပေါ်ကြိုးဗျာ...
ပြိုင်ဖက်စွန်က အပေါ်ကနေ ၀င်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်. ကျွန်တော်လှည့်ပတ်ရှောင်နေရတယ်. ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ပြိုင်ဖက်စွန်က ကြိုးရှည်ရှည်လျှော့ပြီး ကျွန်တော့်အပေါ်ကနေ ခေါင်းလေးလှည့်ခါလှည့်ခါနဲ့ သွားနေတယ်. ဒီကောင်အပေါ်ကနေ အုပ်ချတော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ.
ဒီတော့ သူအုပ်မချခင် ကျွန်တော်ကြိုရှောင်ထားဖို့လိုတယ်.
ပြီးတော့ သူ့စက်ကွင်းက လွတ်နိုင်မယ့် ဖက်ကို ဘေးတိုက်ပြေးတယ်. အမှန်တော့ အဝေးကိုပြေးရင် သူ့ကြိုးအောက်ပိုရောက်သွားမှာပေါ့. ဒီတော့ သူနဲ့ ထိပ်တိုက်စွန်ချင်း တွေ့သလိုမျိုး ဘေးဖက်ကို ဆွဲရတယ်. တစ်ခါတစ်လေများ ရယ်ရတယ်. အဲလိုစွန်ချင်းရှောင်ရင်း အချင်းချင်းငြိလို့ ဗြိ၊ ဗြဲဆိုပြီး လေထဲမှာတင် ပြဲကုန်ကြရော. စွန်ချင်းတိုက်မိတာပေါ့.
ကျွန်တော်ရှောင်ပြေးရင် ပြိုင်ဖက်စွန်ကလည်း ကျွန်တော့်ဖက်ကို ဘေးတိုက်လိုက်တယ်.
ကျွန်တော်ဘေးတိုက်ပြေးနေတာကို ရပ်လိုက်တယ်. ကြိုးနည်းနည်းလျှော့လိုက်တယ်. စွန်ခေါင်းလေးအောက်ဖက်ကို အရောက်မှာ ရစ်ဘီးကို ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်. စွန်ကအောက်ဖက်ကို ပိုထိုးဆင်းသွားတယ်. ကြိုးပြန်လျှော့လိုက်တယ်. ခေါင်းလေးလည်သွားတယ်. ဘေးဖက်ကို ထပ်ဆွဲလိုက်တယ်. ကြိုးထပ်လျှော့တယ်. ပြီးတော့ အပေါ်ကို ပြန်ထောင်တင်လိုက်တယ်.
ပြိုင်ဖက်စွန်ရဲ့ ကြိုးနဲ့ အုပ်ထားခြင်းခံရတာကနေ ကျွန်တော်လွတ်သွားပါပြီ...
ဒါကို ပြိုင်ဖက်စွန်ကလည်း သိသွားတယ်.
ကဲ... ကိုယ့်အလှည့်ပေါ့... ဟတ်ဟတ်
ကြိုးထပ်လျှော့တယ်. အပေါ်ကို ရောက်နိုင်သလောက်တင်တယ်. ထပ်လျှော့တယ်. ခေါင်းလေးဘေးဖက်လှည့်တာနဲ့ ပြန်ဆွဲတယ်. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အပေါ်ကို အုပ်စီးနိုင်အောင် ပြန်တင်တယ်. အဲဒီ့မှာ သူကလည်း ရှောင်ပြန်တယ်. ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ စွန်ချင်းမဖြတ်ခင်မှာ အသာစီးရနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုကို လုယူနေကြပါတော့တယ်.
ကဲ. ကျွန်တော်အပေါ်ခပ်လှမ်းလှမ်းကို ရောက်သွားပြီဗျာ. နောက်ဖက်ကို တစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်တယ်. ကားရှင်းလား လူရှင်းလားပေါ့. ရှေ့ကို နည်းနည်းတိုးသွားလိုက်တယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက် နောက်ဖက်ကို ပြေးဖို့ နေရာပိုရအောင်လို့...
ကြိုးလေးကို ထပ်လျှော့လိုက်တယ်. ခေါင်းလေးက ပြိုင်ဖက်စွန်ဖက်ကို အလှည့်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရစ်ဘီးကို အားထည့်ပြီး ရစ်လို့ စွန်ကို အောက်စိုက်ချလိုက်တယ်.
စွန်ကြိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံထားတာနောက်တစ်ခုက အပေါ်ကြိုးဆိုရင် လျှော့ကြိုးလို့ သတ်မှတ်တယ်. အောက်ကြိုးဆိုရင် ဆွဲကြိုးလို့ ယူဆတယ်. ဆိုလိုတာက အပေါ်ကနေ၀င်တဲ့သူဆိုရင် လျှော့ပေးပြီး ဖြတ်ရင် နိုင်တတ်တယ်. အောက်ကြိုးဆိုရင်တော့ ရစ်ဘီးကို အသားကုန်ဆွဲပြီး ရစ်ဖြတ်ရင် နိုင်တတ်တယ်.
အမြဲမမှန်ပါဘူး. အထူးသဖြင့် လေငြိမ်တဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင် အဲဒီ့ သီအိုရီ မမှန်တော့ပါဘူး. ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ. ကြိုးချင်းဖြတ်ရင် နိုင်ဖို့ အဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကြိုးရဲ့ ဧရိယာတော်တော်များများက သူ့ကြိုးရဲ့ ဧရိယာနည်းနည်းကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆွဲပြေးနိုင်ရင် နိုင်တာပါပဲ. လေပြင်းတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင် ကြိုးချင်းငြိလိုက်တာနဲ့ ဆွဲတာထက် လျှော့ပေးလိုက်တာ နိုင်ခြေပိုများပါတယ်. လေအားနဲ့ ကိုယ့်ကြိုးက များများပိုပွတ်တိုက်နိုင်လို့ပါ. လေငြိမ်ရင်တော့ အသားကုန်ဆွဲပြေးနိုင်ပါမှ စိတ်ချရပါတယ်.
ကျွန်တော့်ကြိုးက အပေါ်ကြိုး၊ လေကသိပ်မပြင်းဘူး. နည်းနည်းငြိမ်တယ်. ကျွန်တော့်နောက်ကြောင်းကိုလည်း ကြည့်ပြီးပြီ. ရှင်းတယ်. ကြိုးချင်းငြိပြီ. ကဲ. ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ.
ခါးကို ရှေ့နည်းနည်းကိုင်းလိုက်တယ်. ရစ်ဘီးကို အသာလေးရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်. ပြီးတာနဲ့ နောက်ကို အားကုန်ပြေးသလို ရစ်ဘီးကိုလည်း အားကုန်ရစ်ထည့်လိုက်တယ်.
ကမ္ဘာကျော်ဆေးနည်းကို ဒူမှမသိအောင် ယူသွားတယ်နော်...
ကျနော်တော့ စွန်လွှတ်ရမှာ ကြောက်တယ်ဗျ။ ပျက်ကျသွားမှာကို အရင်ကြောက်နေတာလေ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ သတ္တိနော်။
ငယ်ဘဝကိုတောင်မှ ပြန်သတိရလာတယ် ကိုရန်အောင်ရေ..။
ငယ်ငယ်က မျက်နှာကြီး မဲသဲနေတဲ့ အထိ စွန်လွှတ်တာ.....ညနေစောင်းလို့ အိမ်ပြန်လာရင် အိမ်ကတောင်မှ မမှိတ်မိဘူး။
ဘယ်က ကုလား ဝင်လာတာလဲတဲ့လေ..အဟဲ။
စွန်လွှတ်ပွဲကို ကိုယ်တိုင် လာအားပေးသွားပါတယ်.. တကယ်ကို လွှတ်နေတယ်လို့တောင် ထင်မိပါတယ်..
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေကို သွားတုန်းက စွန်လွှတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ကိုယ့်စွန်ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုဝမ်းသာမှန်းမသိဘူး။ အခုစာဖတ်ပြီး စွန်လွှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်နော်...
အိမ်ရှေ့က တံတားလေးရှေ့မှာ ကွက်လပ်လေးရှိတယ်ဗျ စွန်တင်လို့လဲကောင်းမှကောင်း ကျနော်ကမလွှတ်တတ်တော့် အစ်ကိုတွေလွှတ်တာကြည့်ပီးအားပေးပေါ့..
တစ်ခါတော့ဗျာ ကျနော့်အစ်ကို မာန်ပါပါနဲ့ နောက်တစ်လှမ်းချင်းဆုတ်ရင်း ရစ်ချလိုက်တာ တံတားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတာ.အောက်ကငုတ်နဲ့ ကံကောင်းလို့ မိတ်မဆက်ဖြစ်တယ်. တဖက်စွန်ကိုတော့ဖြတ်ချလိုက်နိုင်တယ်.